Dropbox beta yemacOS ikozvino inoita kunge iCloud | Ndinobva mac
Dropbox ingangove imwe yeanonyanya kushandiswa mafomu ekugovana mafaera pakati pevashandisi vakasiyana uyezve kusevha iwo atinoda kuita backup. Avo vedu vane Apple zvakare vane iCloud uye mukana weizvi pamusoro peiyo ndiko kusununguka uye nekukurumidza kwekuenderana. Nekudaro neiyo nyowani yeDropbox beta, tinoona sei chirongwa chinotarisa zvakanyanya uye zvakafanana neICloud, zvirokwazvo akanaka kwazvo mashoko.
Dropbox inoda kuita senge iCloud
Imwe yemakakatanwa makuru pakati peICloud neDropbox ndeyekuti iCloud inowirirana neyekuzvarwa dhairekitori ye MacOS zvinyorwa pamwe ne desktop yako. Izvi zvinoreva kuti kana iwe ukashandisa MacBook Pro kumba uye imwe kuhofisi, semuenzaniso, kuwiriranisa uku kunonyanya kubatsira. Tinogona kuve nefaira pane desktop uye isu tichaiwana pane ese mamwe madhivha.
Dropbox inogumira syncing kune yako folda. Zvakadaro yazvino beta yechirongwa ichi kana application inoda kuenda nhanho imwe kumberi. Mune ino purojekiti nyowani sarudzo yekufananidza zvinyorwa, kurodha pasi uye desktop zvakawedzerwa. Kamwe kugoneswa, dhairekita inonzi "My Mac" ichagadzirwa mubhokisi redhiza rinenge riine dhairekitori rese rekutora. Nenzira iyi Dropbox inogona kuve backup mhinduro uye zvichave nyore kutama kubva kune imwe Mac kuenda kune imwe uyezve shandura iPhone kana iPad.
Mhinduro iyi inouya panguva iyo ICloud yatanga kufambidzana nekugovana. Nenzira iyi, iwo maviri makuru mhinduro kuti mafaera edu agare aripo anowedzera kufanana. Pane musiyano mukuru uye iko manejimendi yezvinhu zvakabviswa, izvo parizvino, Dropbox inozviita zvakanyanya.
Iyo nyaya yekuyedza iwo maviri mafomu izvozvi uye nekuchengeta iyo yakanyanya kunaka inokodzera zvatinoda.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac zvirongwa » Zvimwe Zvirongwa zveMac » Dropbox beta ye macOS ikozvino inoita kunge iCloud